တရုတ်နောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်ဖြစ်သောအိတ်ဆောင်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း charger PD100W ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ။ | Staba လျှပ်စစ်
နောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်ဖြစ်သောအိတ်ဆောင်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း charger PD100W
၂။ အလွန်မြန်သောအားသွင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်သည် ၅၀% ခန့်အချိန်သက်သာစေသည်။
၃။ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် Multi high power USB (A / C) ports ။
၅. အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှု ၉၄% အထိ။
မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် 6. အသိဉာဏ်ပါဝါဖြန့်ဖြူး။
*Multi Usb C မြန်သောအားသွင်း 100W ဖော်ပြချက်အသေးစိတ်
USB-C wall charger သည်ပေါ့ပါး။ ခွန်အားကောင်းသော compact charger ကိုလိုချင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ 100 W အထိသိုလှောင်နိုင်ခြင်း၊ PD wall charger သည်သင့်ဖုန်း၊ Nintendo Switch နှင့် MacBook အပါအ ၀ င်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပစ္စည်းအားလုံး (အားသွင်းချိန်သည်စက်ကိရိယာများပေါ်တွင်မူတည်သည်) ။
မြန်နှုန်းမြင့်အားသွင်းနိုင်သည့်နည်းပညာ၊ USB-C ပါဝါဖြန့်ဝေမှုနှင့်အလျင်အမြန်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်းတို့ဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုများဖြင့်ဤအားသွင်းစက်တစ်ခုသည်သင်၏လက်ရှိထုတ်ကုန်များကိုအားဖြည့်ရန်နှင့်အနာဂတ်အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအတွက်ရှေ့သို့ဆက်လက်ရပ်တည်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို port နှစ်ခုလုံးသည် ၁၈ watts အထိမြင့်မားသော voltage အားဖြင့်စမတ်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များမှ ၁၂ လက်မ Macbook ကဲ့သို့သော power-hungry USB-C လက်ပ်တော့များအထိအရာရာသို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ iPhone 8 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသောအားဖြင့်အမြန်ဆုံးအားဖြင့်မိနစ် ၃၀ အတွင်းသုညမှ ၅၀% အထိထည့်သွင်းနိုင်ပြီး၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကေဘယ်လ်နှင့်အခြားစမတ်ဖုန်း / တက်ဘလက်များသည်အရှိန်မြန်သည်။
GaN နည်းပညာဖြင့်အသုံးပြုထားသောဤအားသွင်းစက်သည်အခြားအားသွင်းစက်များထက် ၃၀% သေးငယ်သည်၊ သင်သွားလေရာရာ၌သင့်ကိုလိုက်ဖက်ရန်အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်။ USB ပါဝါဖြန့်ဝေမှုနှင့်အတူကျစ်လျစ်သော 100W PD အားသွင်းစက်သည်သင်၏ USB-PD သုံးထားသောစက်များအတွက်လျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဒီခရီးသွားလာရေးအတွက်အဆင်ပြေစေမယ့် USB Wall charger ကိုစံပြ charger များရဲ့စွမ်းအားကိုအဆပေါင်း ၅၀၀ အထိတစ်ပြိုင်နက်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ မြန်နှုန်းမြင့်အားသွင်းနိုင်သည့်နည်းပညာ၊ USB-C ပါဝါဖြန့်ဝေမှုနှင့်အလျင်အမြန်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်းတို့ဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုများဖြင့်ဤအားသွင်းစက်တစ်ခုသည်သင်၏လက်ရှိထုတ်ကုန်များကိုအားဖြည့်ရန်နှင့်အနာဂတ်အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအတွက်ရှေ့သို့ဆက်လက်ရပ်တည်ရန်လိုအပ်သည်။
PD wall charger နှင့်မြင့်မားသောလိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်း၊ နှစ်ခုပါ ၀ င်သည့်အားသွင်းဖြေရှင်းနည်းသည်ဖုန်းများနှင့် aptops များကဲ့သို့သော USBC နှင့် USBA စွမ်းအားသုံးကိရိယာများအားသီးခြားလွတ်လပ်စွာ (သို့) တစ်ပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ချိန်ညှိထားသော plug ဒီဇိုင်းပါ ၀ င်သော USB wall charger သည်အခြားသော power outlet များကိုပိတ်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားရန်ခွင့်ပြုထားပြီး၊ USB A / C port ကို connection cable အတွက်အဆင်ပြေစွာနေရာချထားရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ USB PD wall charger သည် Intelligent power distribution နှင့်အတူတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်မျိုးစုံ devices များအတွက်အလုပ်လုပ်ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။
အရွယ်အစား: 63 * 63 * 30.5mm
USB-C1: 5-15V / 3A, 20V / 5A (အများဆုံး 100W)
USB-C2: 5-15V / 3A, 20V / 5A (အများဆုံး 100W)
USB-C3: 5-15V / 3A, 20V / 5A (အများဆုံး 100W)
USB-C1 + C2: 65W + 30W (အများဆုံး 95)
USB-C1 + C3: 65W + 30W (အများဆုံး 95)
USB-C1 + C2 + A: 45W + 30W + 18W (အမြင့်ဆုံး 93W)
USB-C1 + C2 + C3: 45W + 30W + 18W (အမြင့်ဆုံး 93W)
စူပါပါဝါ 100w Gan PD Charger
100W ကြီးမားသောအားသွင်းနိုင်သည့်စွမ်းအားကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် USB-C လက်ပ်တော့ပ် ၂ ခုနှင့်စမတ်ဖုန်း ၂ လုံးကိုအားသွင်းနိုင်သည်။ USB-C ကို output: 5V = 3A / 9V = 3A / 20V = 5A ။ port ကိုတစ် ဦး လျှင် USB-A ကို Output 5V = 2.4A max ကို။
အသိဉာဏ်ပါဝါခွဲဝေ Mစာအုပ် Pro ဂharger
Device တစ်ခုသည် USB-C port နှင့်ချိတ်ဆက်စဉ်သို့မဟုတ်အားသွင်းထားသည့် ၄ ခုအထိအားဖြန့်ဝေနေစဉ် ၁၀၀W အထိအားသွင်းနိုင်သည့်စွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည် devices များတစ်ပြိုင်နက်တည်း full-speed charging ကိုပြုလုပ်နိုင်စေသည်။
USB-A နှင့် USB-C ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များ၊ လက်ပ်တော့များနှင့် ၁၅ လက်မ MacBook Pro၊ ၂၀၁၈ MacBook Air နှင့် ၁၃ လက်မ Dell XPS စသည့်ချွတ်ယွင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အမြန်အားသွင်း Multi Usb Quick Charger
၎င်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသော voltage နှင့် switching frequency တွင်လည်ပတ်နိူင်သောကြောင့်သေးငယ်။ ပိုမိုထိရောက်သော charger များဖြစ်ပေါ်စေသည်
နောက်တစ်ခု: လူကြိုက်များသောခရီးသွားလာနိုင်သည့်စွမ်းအားမြင့် 65W အမျိုးအစား c pd usb charger PD65W